waiter/waiteress Archives - Glory Assumption Space
Waiter /Waitress – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၁၄၀,၀၀၀ ကျပ်+++
Waiter /Waitress – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၁၄၀,၀၀၀ ကျပ်+++ / သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ။ • အထက်တန်းအောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ • အတွေ့အကြုံ ( ၁ ) နှစ်ရှိရမည်။ • နေစားငြိမ်းစီစဉ်ပေးသည်။ • တစ်ပတ်တစ်ရက်နားခွင့်ရှိသည်။ • ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်သူဖြစ်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၁၀:၀၀ နာရီအထိတာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော Restaurant Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Waiter /Waitress – Male /Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Hotel တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 4. Waiter /Waitress – Male /Female (5)Posts /လစာ- ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ် / နေပြည်တော်မြို့နယ်။ - Graduate (or) Certificate Holder - Experienced in F & B Service is perferrable - Salary + Service Money မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Waiter/Waitress – (15) Posts /Salary – 150000 (Above) Kyats /Lamadaw Township
မင်္ဂလာပါ။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Restaurant တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Waiter/Waitress – (15) Posts /Salary – 150000 (Above) Kyats /Lamadaw Township - ပညာအရည်အချင်း အထက်တန်းဆင့် -ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ရမည် -Experience (1)year -English အသင့်အတင့်ပြောတတ်သူဦးစားပေးမည် မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone	No.-09-263119775, 09-262223785,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ	–MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။